တစ်ကမ္ ဘာလုံးမှာမှ တစ်ခုတ ည်းရှိတဲ့ ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးထားတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ ချပြလာတဲ့ ချစ်သုဝေ – Shwe Likes
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ လူလေး လှသလို စိတ်ထားေ လး လည်း သိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင် ချစ်သုဝေ ကတော့ တစ်နို င်ငံလုံး သူမရဲ့ ပရိသတ် မရှိေ လာက်ေ အာင်ကို အောင်မြင်ပြီး လူချစ်လူခ င်ပေါများသူတစ်ေ ယာက်ဖြစ် ပါတယ်။
လက်ရှိ မြန်မာ့နွေ ဦးတော် လှန်ရေး မှာလည်း ကိုယ်တိုင် ဖန်တီး ထားတဲ့ လက်မှုအနုပညာ ပစ္စည်းေ လးတွေနဲ့ တော်လှန်ရေးမှာ ပါဝ င်နေတဲ့ ချစ်သုေ ဝက ဒီကေ န့မှာလည်း တစ်ကမ ္ဘာလုံးမှာမှ တစ်ခုတ ည်းရှိတဲ့ Macrame လေးကို လွတ်လပ်ရေးနေ့၊ ပြည်ထော င်စုနေ့မှာ ချပြလာခဲ့ပါ တယ်။
“လွတ်လ ပ်ရေးနေ့… ပြည်ထောင် စုနေ့… ဒီတခါ “Our Land” ဖန်တီးမှုလေးဟာ Treza အတွက်တော့ reference တစ်ခုမှယူ စရာမရှိပါပဲ ဖြစ်ချင်စိ တ်ကို ရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ “macrame” “🎼🎼တို့ပြည်..တို့မြေ..များလူ ခပ်သိမ်းငြိမ်းချမ်းစေဖို့ ခွင့်တူညီ မျှဝါဒြ ဖူစင်တဲ့မြေ🎶🎶”….
တကယ်ပဲ ပြည်ထောင်စုကို အသက်ပေးလို့ ကာကွယ်ပေးေ နရပြီ။ ဒီတော့ “Our Land” macrame လေးကလည်း တန်ဖိုးရှိတဲ့အသ က်တွေအတွက် မြေပြင်ကို တိုက်ရိုက်စီး ဆင်းသွားမှာပါ။ ” ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သုဝေကေ တာ့ သူမကိုယ် တိုင်ထိုးထားတဲ့ macrame လေးကိုရော င်းချပြီး ရံပုံငွေရှာေ ဖွခဲ့ရာ ပထမအကြိမ် သိန်း (၆၀) ကျော်၊ ဒုတိယ အကြိမ် သိန်း (၁၇၀) ကျော်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု တတိယအကြိမ်မှာ ရံပုံငွေတွေ ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရပါ ဦးမယ်နော်။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ လူေလး လွသလို စိတ္ထားေ လး လည္း သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့တဲ့ အဆိုေတာ္၊ သ႐ုပ္ေဆာင္ ခ်စ္သုေဝ ကေတာ့ တစ္နို င္ငံလုံး သူမရဲ့ ပရိသတ္ မရွိေ လာက္ေ အာင္ကို ေအာင္ျမင္ၿပီး လူခ်စ္လူခ င္ေပါမ်ားသူတစ္ေ ယာက္ျဖစ္ ပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာ့ေႏြ ဦးေတာ္ လွန္ေရး မွာလည္း ကိုယ္တိုင္ ဖန္တီး ထားတဲ့ လက္မႈအႏုပညာ ပစၥည္းေ လးေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝ င္ေနတဲ့ ခ်စ္သုေ ဝက ဒီေက န႔မွာလည္း တစ္ကမ ၻာလုံးမွာမွ တစ္ခုတ ည္းရွိတဲ့ Macrame ေလးကို လြတ္လပ္ေရးေန႔၊ ျပည္ေထာ င္စုေန႔မွာ ခ်ျပလာခဲ့ပါ တယ္။
“လြတ္လ ပ္ေရးေန႔… ျပည္ေထာင္ စုေန႔… ဒီတခါ “Our Land” ဖန္တီးမႈေလးဟာ Treza အတြက္ေတာ့ reference တစ္ခုမွယူ စရာမရွိပါပဲ ျဖစ္ခ်င္စိ တ္ကို ရေအာင္ ဖန္တီးထားတဲ့ “macrame” “🎼🎼တို႔ျပည္..တို႔ေျမ..မ်ားလူ ခပ္သိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းေစဖို႔ ခြင့္တူညီ မၽွဝါၿဒ ဖူစင္တဲ့ေျမ🎶🎶”….
တကယ္ပဲ ျပည္ေထာင္စုကို အသက္ေပးလို႔ ကာကြယ္ေပးေ နရၿပီ။ ဒီေတာ့ “Our Land” macrame ေလးကလည္း တန္ဖိုးရွိတဲ့အသ က္ေတြအတြက္ ေျမျပင္ကို တိုက္ရိုက္စီး ဆင္းသြားမွာပါ။ ” ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။
ခ်စ္သုေဝေက တာ့ သူမကိုယ္ တိုင္ထိုးထားတဲ့ macrame ေလးကိုေရာ င္းခ်ၿပီး ရံပုံေငြရွာေ ဖြခဲ့ရာ ပထမအႀကိမ္ သိန္း (၆၀) ေက်ာ္၊ ဒုတိယ အႀကိမ္ သိန္း (၁၇၀) ေက်ာ္ရရွိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အခု တတိယအႀကိမ္မွာ ရံပုံေငြေတြ ဘယ္ေလာက္ရမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရပါ ဦးမယ္ေနာ္။ Source: Chit Thu Wai ‘s fb
ယောကျာ်းသား တစ်ယောက်လိုမျိုး စစ်မှုထမ်းဆောင်တော့မယ့် ထိုင်းနိုင်ငံက လိင်ပြောင်း မိန်းမချောလေး